ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ယနပေဲ့ကှယျလှနျသှားတဲ့ အဆိုတျောရှရေညျသိနျးတနျရဲ့ခငျပှနျးနလေ – Bagan Thar
by Bagan Thar
နလေဆုံးပါးသှားတာဘယျသူမှမယုံနိုငျသေးလောကျအောငျခံစားနကွေပါတယျ၊“သားလေးနလေငွိမျးအေးရာဘုံဘဝမှာနရေဈတော့သားလေးရေ။မယုံနိုငျသေးသျောလညျးထှကျခှာသှားသူကတော့အေးငွိမျးသှားပွီ။ကနျြခဲ့သူအားလုံးမှာတော့”လို့ ဟာသလူ ရှငျတျောကံပှငျ့က စိတျမကောငျးစှာပွောထားပါတယျ ကနျြနခေဲ့တဲ့မိသားစုနဲ့ထပျတူခံစားရပါတယျ။ကောငျးရာဘုံဘဝသို့ရောကျရှိပါစေ။
ရွှေရည်သိန်းတန်က အောင်မြင်နေတဲ့မြန်မာတေးသံရှင် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရည်သိန်းတန်းက ခက်ပွန်းဖြစ်သူသရုပ်ဆောင်နေလနဲ့လက်ထက်ထားတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ကြင်ဦးစမောင်နှံ လိုပါပဲ။
ယနေ့မှာ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုကြားသိခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင်နေလက ယနေ့မှာပဲ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ကွယ်သွားတယ်ဆို့တဲ့သတင်းပါ။ကြားရတာအလွန်စိတ်မကောင်းစရာပါ။နေလဟာအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့လူ့ဘဝကထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါ၊နှမြောမိပါတယ်။
နေလဆုံးပါးသွားတာဘယ်သူမှမယုံနိုင်သေးလောက်အောင်ခံစားနေကြပါတယ်၊“သားလေး နေလ ငြိမ်းအေးရာ ဘုံဘဝမှာ နေရစ်တော့ သားလေးရေ။ မယုံနိုင်သေးသော်လည်း ထွက်ခွာသွားသူကတော့ အေးငြိမ်းသွားပြီ။ ကျန်ခဲ့သူ အားလုံးမှာတော့”လို့ ဟာသ လူရွှင်တော် ကံပွင့်က စိတ်မကောင်းစွာ ပြောထားပါတယ်။
ဒီနေ့ ကှယျလှနျသှားတဲ့ အဖှားအတှကျရညျစူးပွီး သုသာနျက အကူအညီပေးနတေဲ့သူတှကေို ထမငျးဗူးတှလှေုခဲ့တဲ့ သဇငျထူးမွငျ့
ကိုဗဈရောဂါကာကှယျနိုငျရနျ သူတို့မိသားစုသောကျသုံးနကေသြဘာဝဆေးကိုမြှဝပေေးလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျထူးခနျ့ကြျော
ရိုတျကူးရေးတှမေရှိလို့ live လှငျ့စြေးရောငျးနရေပမေယျ့...
Copyright © 2021. Created by Bagan Thar.